sawirada kulankii Madaxweynaha Puntland & Xildhibaan Mareykan ah + warsaxaafadeed – SBC
sawirada kulankii Madaxweynaha Puntland & Xildhibaan Mareykan ah + warsaxaafadeed
Sida aad kula socoteen wararkii shaley aan idiin soo gudbinay ee ku saabsanaa kulan magaalada Boosaso ku dhexmarey Madaxweynaha Puntland & Senetor ka tirsan Baarlamanka Mareykanka ayaa waxaa naga soo gaarey xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland sawiro & warsaxaafadeed kulankaasi ku aadan.
30 Abriil 2011
Wafdi Maraykan ah oo uu hogaaminayo Xildhibaan Mark Kirk oo xubin ka ah aqalka Senate-ka ee Baarlamaanka Maraykanka lagana soo doortay Gobolka Illinois ayaa booqday deegaamada Puntland oo ka mid ah gobollada nabdoon ee Somalia.
Booqashada Xildhibaan Kirk ayaa ah markii ugu horaysay uu mas’uul ka tirsan Dowladda Maraykanka booqasho ku yimaado dalka Somalia tan iyo 1992-kii xilligaasoo Madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka George H. W. Bush uu booqday Magaalada Muqdisho isagoo taageersanaa dadaalka gargaarka bini’aadanimo oo uu hormuud ka ahaa dalka Maraykanka.
Wafdiga Xildhibaan Kirk waxaa garoonka diyaaradaha ee Magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyey Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Puntland, sida Agaasimaha Guud ee Madaxtooyadda Cali Barre Jamac; Wasiirka Waxbarashada Cabdi Farax (Juxa); iyo Wasiirka Deegaanka C/gani Yusuf Cadde.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. C/raxman Maxamad Maxamud (Farole) ayaa ku qaabilay xarunta Madaxtooyadda Puntland ee Boosaaso Wafdiga Xildhibaan Kirk ka dib markii uu Xildhibaanku aqbalay casumaadii Madaxweynaha Puntland.
Wadahadaladii xubnaha Wafdiga iyo Mas’uuliyiinta Puntland ayaa waxaa ka mid ahaa: xaaladda abaaraha; arrimaha amaanka, la dagaalanka burcad-badeeda iyo argagaxisada; arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka; gargaarka bini’aadanimada; xiriirka caalamiga iyo hormarinta; iyo taageerida Dowladda Maraykanka ee gobollada nabdoon ee Somalia.
Wafdiga Xildhibaan Kirk ayaa booqasho ku gaaray goobo kala gedisan oo ku yaala Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Goobaha uu Wafdigu booqday waxaa ka mid ahaa: Dekedda Boosaaso; Wasaaradda Maaliyadda; Wasaaradda Dekedaha; Bangiga Dhexe ee Puntland laantiisa Boosaaso; Isbitaalka Guud ee Boosaaso; xarunta Ciidamada Badda Puntland (PMF) oo ku taala duleedka Magaalada Boosaaso; Maxjarka Boosaaso iyo ugu danbeyntii, Wafdiga ayaa booqasho ku gaaray Xabsiga weyn ee Puntland, halkaasoo ay ku xiran yihiin in ka badan 240 burcad-badeed Soomaaliyeed.
Xildhibaan Kirk iyo wafdigiisa ayaa dib ugu duulay dalka Djibouti isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay booqashadiisii Puntland, wuxuuna amaanay xasilloonida iyo amaanka ka jira deegaamada Puntland.
Waa markii ugu horaysay oo uu Mas’uul sare oo ka tirsan Dowladda Maraykanku booqdo Puntland tan iyo markii la aasaasay Dowladda Puntland sanadkii 1998-kii.
asc dhaaman waan idin salaamay akhyaarta SBC waana uga mahadcelinayaa hawsha adag ee ay uhayaan dalkooda iyo dadkooda …………..marka 2aad waxaan aad ugu faraxsanahay inuu maanta yimaado puntland mid ka mid ah senatorada maraykanka uuna maanta uu qiimeeyay waxa puntland ka jira…. isagoo uu maanta halkaas ay isku waraysteen madax ugu sarreya puntland ,,,, aad ayaan ugu faraxsanahay waddankayaga puntland oo hadda nabad iyo barwaaqo iyo horumar ka ku naalloonaya…..taasi waxay ku tusin kadhaa inay maanta puntland tahay meesha kaliya ee nabadda ah ee somalia ….taasna waxay u horseeraysaa inay noqoto puntland meel ay isugu yimaadaan umadda somaliyeed iyo dhamaan madaxda adduunka si ay uga caawiyaan puntland horumarka ay u hayso shacankeeda si ay u sii siyaadiso dadaalkeeda…………..midda kale maanta waxaan aad ugu mahad celinayaa ciidamada ammaanka ee maanta oo dhan sugayay xasiloonida magaalada bosaso ,,,,,,,waxaan kaloo aan aad ugu faraxsanahay inay maanta qaateen wafdigii ka socday USA mid ka mid ah hidaha iyo dhaqanka somaliada ……………………aad baad u mahadsamtihiin all sbc
wale puntland way horo martay allah ha iska daayee, waxaan xasuustaa 1998 markii madaxwaynahii america markaas joerge bush uu imaaday muqdusho, somalia na aysharafta alahayd, puntland maantay waxaa soo booqday madaxda wadamadacaalamka ugu waawayn berina waxaa soo booqan doono cid walboo madaxa waaana cadahay in puntland amnigeeda iyo horomarkeedaba uu sareeyo keep doing faroole shaqada wacanaa noo hayso hadaanu nahay shacabka reer puntland
asc dhamaan waxan isleeyahay waa guul siyaasadeed oo ku soo jeedinaysa indhaha caalamka in amaanka puntland uu yahay mid la isku halayn karo laakiin ma qabo in faaido kale ay puntland u gu jirto
C/karin c/qadir says:
Asc waxan aminsanahay e dhabta ah ee ah in manta tahay mustaqbalka kaliye esomali ledahay ah hanala ogado wadama calamka ugu sareya waxanu lenahay hobey puntlandi wanabadey hobey dhulbarwaqa ilah dhigay hobey nin barta madaynkarayey (well come the true home and u nevery …)
Idiris c/qadir says:
Hadi anu nahay ururka dhalin puntland e ee wadama south an center africa ee la as asay 25 may 20011 aan sikal iyo lab ah uso dhawaymayna boqadasha number of barlament e mareynka waxan aragna in manta rajada puntland aytahay horumar nabadan iyo barwaqo in ay hore uhig sadan waxana can baraynayna ano ku hadalay magaca ururka an u ahay gudomiya ee kumidoben walahay dhalinyarada puntlan ee(s c u puland)dagalki dadka rer puntland ku dhinten e kadhacagay magalada glkio waxana lenahay wankugu dhimay ekadhimay ee jojiya walay dagal sukeya marabno doni mayno mudanayal dhalin wanagsanayd epuntlan jogta waxan leyahay hor istaga o jojiye oo yan wil danbe noga dhiman stop stop stop dagal sukeye
farax faquul says:
waxaa mahadleh ilaahy reer puntland waxaan idiin cadynyaa in puntland soo booqdaan madaxdii america ugu sarysay aduunkoo dhan waxaa uubarty soomaliya dadku suu yahy marwadii hilliry clinton waxay tiri soomaliya waxaa kala xaajoonaynaa puntland koonfurta dadka jooga mudo waxay kujireen iskadaba wareeg cadaw america ay joogta koonfur puntland waa meel dadka jooga yihiin dad waligood dawldo iyo boqortooyoyinlahaa intii 20 sano hayteen kaladanbayn 2 qof oo dirta laka celinyay waxay cadysay in soomaliya arinteeda ay puntland kala xaajoonyaan maada puntland waxsoosaarna dhaqale leeyihiin reer puntland waxaa laga rabaa inaan cadwgeena gacanta ku qabano cidkasta dalkeena waxksmysankarto
maasha allah akhyhaartadhamaan waaan idin salaamay waan idiin ka mahad celinayaa saad taageeraha ugu haysaan dawladdiina iyo dalkiina